China Mobile Kongiri Batching Plant Kugadzira uye Fekitori | Jusheng
Kongiri Batching Uye Kusanganisa Chidimbu
Kongiri Batching Chirimwa Conveyor
Yakaomeswa Sanganisa Konkrete Batching Miti
Mini Kongiri Batching Chirimwa
Yakagadzirira Sanganisa Kongiri Batching Miti
Iyo mobile kongiri batching chirimwa ndeye tirera-yakaiswa dhizaini. Iyo batching conveyor, kongiri musanganisi, anorema masystem, sikuru conveyor uye simende silo zvakanyatsobatanidzwa mune tirera-yakaiswa unit, inova yakakosha mamiriro.In kuitira kusangana neunyanzvi, basa uye kuumbana, nharembozha batching chirimwa chiri pre- yakabatana zvachose kubva kufekitori, iyo inoderedza nguva yekumisikidza uye kuyedza mashandiro eiyo kongiri batching chirimwa.
Chinhu Chikwata MHZS60
Dzidziso kugadzirwa m³ / h 60
Kubuda kwemusanganisi m³ 1.0
Yekudyisa mhando Belt Kudyisa
Batcher modhi WDC-1200-Ⅲ
Batcher (mari yemabhini) m³ 12X2
simba remusanganiswa kw 22X2
Kusimudza simba kw 7.5X2
Kubuda kureba m 3.9
Max kuyera & Kururama Aggregate kg 2500 ± 2%
Upfu zvinhu kg 600 ± 1%
Mvura kg 250 ± 1%
Yokuwedzera kg 20 ± 1%
Chinhu Chikwata MHZS75
Dzidziso kugadzirwa m³ / h 75
Kubuda kwemusanganisi m³ 1.5
Batcher modhi WDC-2400-Ⅲ
Batcher (mari yemabhini) m³ 15x2
simba remusanganiswa kw 30x2
Kusimudza simba kw 11x2
Kubuda kureba m 3.8
Max kuyera & Kururama Aggregate kg 3000 ± 2%
Upfu zvinhu kg 800 ± 1%
Mvura kg 350 ± 1%
1. Dhizaini dhizaini dhizaini, yakanyanya kuwanda yezvinhu zvekusanganisa chiteshi pane imwechete turera yuniti;
2.Humanized operation mode, yakatsiga uye yakavimbika basa, kugadzikana kushanda munzvimbo dzakasiyana dzakashata.
3. Yakatengwa Twin-shaft kongiri musanganisi (mupuraneti musanganisi anogona zvakare kushandiswa), iyo inogona kumhanya ichienderera, sanganisa zvakaenzana, uye sanganisa zvine simba uye nekukurumidza; inogona kupedzwa munguva pfupi. Kune yakaoma kongiri, semi-yakaoma kongiri, plastiki uye huwandu hwakasiyana hwekongiri, inogona kusanganiswa zvakanaka.
Twin-shaft kongiri musanganisi
4. Iyo yose chirimwa inogona kukurumidza kuendeswa kunzvimbo yekuvaka uye kuunganidzwa pane saiti kuburikidza neiyo yakazara-yakaturikwa fomu;
5. -Kutangisa-basa kwapera usati waendesa, uye kuvaka kunogona kuitwa pasina kutumwa;
6.Sophisticated kumisikidzwa, yakakwira degree of otomatiki, inoshanduka uye inofamba kufamba, yakapusa uye yakagadzikana kushanda.
Chimiro chikuru cheiyo mobile kongiri batching chirimwa chakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: iyo yekudzvanya system, iyo yekusanganisa dura uye iyo batching inorema dura.
Iyo yekuvhenganisa dura chikuva chakagadzirwa nesimbi furemu dhizaini ine mbiri inoshanduka chikamu I-yakaumbwa main beam, inova inorema uye ine zvirinani kuomarara uye kuvhunduka kunwiwa kupfuura zvakajairika chimiro. Iyo yekusanganisa dura uye inoyerera dura inoumba muviri wakaomarara, unosanganiswa ine hwaro, iyo inonyatso deredza vibration kubva kune yekongiri musanganisi; rutsigiro rwunotora makona emakona, ayo asiri nyore chete muchimiro, asi zvakare akapamhama muchadenga.
Imba yekudzora yakakomberedzwa nemahwindo, ayo akabatana nemutumbi mukuru wekongiri yekusanganisa chirimwa, uye inogona kugadzirwa kuve hwakaenzana hwakaenzana neyekusanganisa dura. Iyo yekufamba chikuva cheiyo yekusanganisa dura yakagadzirwa nesimbi nesefa, iri nyore yekutarisa nenguva yekugadzira uye kubuda kweanosanganisa host. Usati wabva mufekitori, iyo sisitimu yekudzora inoenzanisirwa uye yakagadziriswa uye inosunganidzwa neanogadzira michina, iyo inoderedza iyo yeku-saiti yekuisa basa uye mukana wekutadza. Iko hakuna kudikanwa kwekudzokorora-kubatanidza uye kubatanidza tambo kana uchiendesa michina.
Pane mapoda maviri airema hoppers (simende, kubhururuka dota), imwe mvura inorema hopper, maviri emvura kusanganisa anorema hoppers uye imwe yeanotangira-yekuchengetedza hopper yakaiswa mubatch yekuyera. Zvese huremu zvinotora yakakwira-chaiyo sensors, yakapusa kumisikidza, inyore kugadzirisa uye kushandiswa kwakavimbika. Iyo yekubuda yeiyo hupfu yairema hopper inotora otomatiki inodzorwa pneumatic butterfly vharuvhu, yakapfava kubatana uye kuzere kuvhara kunogamuchirwa panzvimbo uye nzira yekubuda. Iko kusanganisa kunorema hopper kunoiswa pamusoro pemvura metering hopper, uye chiteshi chinotora iyo isina simbi bhora vharuvhu kuburitsa zvinhu.
Iyo yakazara ihwo huwandu hwakaunganidzwa kana chiyero chimwe cheiyo elektroniki chiyero. Cement, mvura uye zvinowedzerwa zviri kuyera hoppers zvine chaiyo kuyerwa, PLC yepakati kutonga, uye zvakapusa mashandiro. Iyo yehuwandu inotumirwa uye inodyiswa nemabhanhire. Kunyangwe iri kuyerwa kwehuwandu, hupfu kana mvura, iyo yekumhanya yekumhanya inodarika ka120 pasekondi, uye kurongeka uye kuvimbika kwechiyero kunovimbiswa neakakwira-chaiwo maseru. PLC yepakati kudzora, inogona kuvhiyiwa otomatiki kana nemaoko. Kana iyo indasitiri komputa kana PLC ikakundikana kudzora zvakajairika kugadzirwa kweiyo inosanganisa chirimwa, manyore mashandiro mabhatani anogona zvakare kushandiswa kuita echinyorwa mashandiro kudzivirira kunetseka kwekugadzira. Iko kuvhiya kuri nyore uye kuri nyore kugona. Iyo inesimba pani inoratidzira inogona kunyatsonzwisisa mashandiro emamiriro echinhu chimwe nechimwe, uye inogona kuchengeta nekudhinda mushumo data (stylus kudhinda, quadruplicate), iyo inopa kurerukirwa kukuru kwegadziriro yekuronga manejimendi. Iyo yakagadzirirwa maviri ekutarisa masisitimu eiyo chaiyo-nguva yekutarisa. Chigadzirwa chekugadzira.
Iwo makuru magetsi emagetsi emusanganisi, sikuru muchina, chiyero chekuyera, mweya wekudzora zvikamu uye yekudzora system zvese zvinounzwa mabhenji, ayo asingori chete anoderedza zvakanyanya kutadza kweyekushandisa kwemidziyo, asi zvakare anovandudza kuyerwa kunyatso kwemidziyo
▶ Ndezvipi zvinhu zvemuchina wekusanganisa nhare?
1 chisanganiso chassis:
Chantis yakavhenekerwa chisimisi cheinjini huru, iyo ine tarakita pini uye gumbo rekupaka kwetiraki; Chiyero cheyero yemusanganisi, simenti nemvura, kusanganisa pane chassis. Gara wakakomberedza tafura yekutenderera, kutuka zvichingodaro.
2 Kudzora imba:
Imba yekudzora iri pazasi pechisanganiso chassis, uye iyo inosanganisa chirimwa yakazara otomatiki yekudzivirira system inoiswa mukati. Imba yekutonga inoshanda senzvimbo yepamberi yekutsigira chirimwa chose kana chiri kushanda. Kana uchichinjisa uye kutakura, iyo yekudzora mukamuri inodzikwa uye inochengeterwa mukati mehombe yebracket; tambo dzese dzekudzora hadzidi kubviswa.
3 Kuyera kwehuwandu:
Iyi sisitimu iri kumashure kwekupedzisira kwenzvimbo inovhenganiswa yekuvhenganisa chiteshi, iyo yekumusoro chikamu ihuwandu (jecha, ibwe) yekuchengetedza hopper, yekuchengetedza hopper inogona kuganhurwa kuita 2 kana 4, uye kumisikidza yakakwira bhodhi kuti iwedzere iyo yekuchengetera masimba, pneumatic zvichiteerana vhura mashandiro emusuwo, chiyero chakapetwa chezvakasiyana zvezvinhu kuwanda kuyerwa.Pazasi pane yakagadzirirwa kufamba kumashure zambuko uye furemu makumbo ekushanda.
4 Peripheral zvinhu:
Kune iyo simenti silo uye sikuru conveyor, iyo yeparipheral zvikamu zvikamu zvakakosha zvisinei nebasa kana kutakurwa, saka vanogona kutakurwa uye kubvongodzwa seyese pasina kubvarura.
▶ Ndezvipi zvinhu zvakakosha zveiyo mobile kongiri batching chirimwa?
Iyo huru ficha ndeyekuti inogona kufamba seyese Parizvino, chinofambika kongiri yekusanganisa chiteshi inonyanya kugovaniswa kuita traction mhando uye tow tow, iyo traction mhando chassis ine yakazara kumberi uye kumashure zambuko; Iyo yakadhizirwa chassis inongova neshure ekisero chete. , nechemberi kumucheto kwakakwidzwa pabhiriji yetarakita yechigaro.
Otomatiki Aggregate Batching Machine, Aggregate Batching System, Aggregate Batching Dosing Sisitimu, Concrete chisanganiso Spare Zvikamu, Automaticaggregate Batching Fertilizer Chisanganiso, Otomatiki Aggregate Batching System,